အဟောငျးလေယာဉ် - Rikoooo
Vultee XP ကို-54 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 94.5 ကို MB
အတွက် FSX/P3D သဟဇာတဗားရှင်း FS54 များအတွက် hereVultee XP ကို-2004, မီလ်တန် Shupe နဲ့သူ့အဖွဲ့ကလက်ရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အပြီးအစီး 12 repaints နှင့်အတူအထုပ်များနှင့်အများအပြား models.The Vultee XP ကို-54 Swoose Goose အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာရများအတွက် Vultee လေယာဉ်ကုမ္ပဏီမှတည်ဆောက် 40s နေရှေ့ပြေးပုံစံတိုက်လေယာဉ်ခဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
လိုက်ဖက်တဲ့ FS2004 နှင့်သဟဇာတ
Yakovlev တောင်ပေါ်-18T FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 25.0 ကို MB
FS18 ဘို့ Yakovlev တောင်ပေါ်-9T မော်ဒယ်။ စစ်မှန်ဒိုင်းနမစ်, ကာတွန်းပန်ကာနှင့်အတူ 2D panel က, အထွာ, အသံအစု, ထုံးစံပျက်ကွက်စနစ်,4ကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းရုပ်ပြမော်ဒယ်များ, အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ကာတွန်းကားရဲ့ Virtual cockpit ပါဝင်သည်,5ကွဲပြားခြားနားသော textures.Yakovlev (ရုရှား :. ОКБимЯковлева) တစ်ဦးရုရှား aircra ဖြစ်ပါတယ်။ .. ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Alexey Yuzefov
Savoia Marchetti SM-79 MVG FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 16.0 ကို MB
အဆိုပါဝင်ရောက်ဖို့ FSX & P3D ဒီဗားရှင်းမှာ add-on hereThe Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero ( "Sparrowhawk" အတွက်အီတလီ) တစ်ဦးသစ်သား-and သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သုံးအင်ဂျင်အီတလီအလတ်စားဗုံးခွဲသူဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ မူလနှစ်ပေါင်း 1937-39 အတွက်အစာရှောင်ရာခရီးသည်လေယာဉ်ကို, ဒီနိမ့်တောင်ပံ monoplane အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Manuel ဗီလာ
Avro Lancaster TP464 DB AJJ v6 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 21.2 ကို MB
အတွက် FSX & P3D All Programs - - 617th မေလ 16.You Start Menu ထဲမှာလေယာဉ်အစီအစဉ်များကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် - version ကိုသိုက် hereThis pack ကိုပု Moehne နှင့်ဧဒါရေကာတာ 17 အပေါ် 1943 တပ်မှ RAF Dambuster ဝင်ရောက်စီးနင်း၏ဇာတ်လမ်းပြောပြရန်ရည်ရွယ်လေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အစီအစဉ်များပါဝင်သည် Rikoooo Add -ons - Avro လှံ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ရော့စ် McLennan
Yakovlev တောင်ပေါ်-42 2.0 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 30.4 ကို MB
FS42 ဘို့ Yakovlev တောင်ပေါ်-2.0 ဗားရှင်း 2004, လှပသောပြင်ပတွင်မော်ဒယ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုနှစ်ခု repaints UR-42369 Lviv Airlines နှင့် Aeroflot တောင်ပေါ်-42 CCCP-42336, ဒီ add-on အဘို့အထူးဒီဇိုင်း 2D panel ကပါဝင်သည်။ ဒီ realism.Package contents တွေကိုအတူပျံသန်းဖို့အလွန်ကြီးသော: အင်္ဂလိပ်နှင့် Ru အတွက်မှတ်တမ်းတင် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Lviv Yak42 အုပ်စု & Samdim ဒီဇိုင်း
Caravelle III ကိုပြင်သစ်လေကြောင်း AFG v1.0 Picardie FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 40.8 ကို MB
နာမည်ကြီး Caravelle (AFG အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး) ၏ပရိသတ်များအဘို့, FS2004 အဘို့ဤထိပ်တန်းလေယာဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, အများဆုံးဖို့တွန်းအားပေးခြင်း simulation, အံ့သြစရာသရုပ်မှန်, ဒီ add-on လစျြလြူရှုထားမည်မဟုတ်။ အ 2D panel ကို (အဘယ်သူမျှမ VC ကို) မှလေယာဉ်မှူးများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အဟောင်းအချိန်သတိပေးချက်များ, ပထမဦးဆုံးအရပ်သား jet.It ၏ esse ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ AFG (မဟာမိတ် FS Group မှ)
Waco NWA စင်းကို FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size:9ကို MB
အဆိုပါအထုပ်အနောက်မြောက်လေကြောင်းလိုင်း WACO ရေတပ်အဖြစ်ကိုယ်စားပြုရွှေခေတ် Simulator CTO ဖြစ်သူမော်ဒယ်များ 1929-1936.Weaver လေယာဉ်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် WACO အတွက်လကွောငျးစာပို့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် operated ခံရလည်းပါဝင်သည် Troy (အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်) တွင်အခြေပြုဟောင်းတစ်ဦးအမေရိကန်လေယာဉ်တင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ 1919 နှင့် 1946, ကုမ္ပဏီအများအကြား ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဗလာဒီမာ Gonchar
Handley-စာမျက်နှာဗစ်တာ K.2 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 11.8 ကို MB
ယခင်က payware, ဒီ add-on ယခုမှာအခမဲ့အဘို့, ဒါကြောင့်စစ်ပြီးမော်ဒယ်၏မိတ်ဆွေတို့ကိုမွေ့လျော်ရလိမ့်မည်။ အလွန် pleasant.The Handley စာမျက်နှာဗစ်တာ HP.80 ဗြိတိသျှမဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်ခဲ့သည်လေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ထုံးစံအသံနှင့်တစ်ဦးကို virtual cockpit ပါဝင်သည်။ အ Avro Vulcan နှင့် Vickers သူရဲနှင့်အတူသူသည် TR ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Consolidated PBY Catalina FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:5817
Size: 11.2 ကို MB
နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသော add-on ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ပရိသတ်များအဘို့, ပိုပြီးအဘယ်သို့ကြောင့်လည်းတစ်ဦးရေယာဥ်ပျံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးမော်ဒယ်များတဆယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ payware add-on ယခုအခမဲ့အဘို့သင့် enjoyment.The Consolidated PBY Catalina Consolida အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့် 1930s နှင့် 1940s တစ်ဦးအမေရိကန်ပျံသန်းလှေသည်တစ်ဦးဖြစ်သူက ... ဆက်ဖတ်ရန်
Avia 57 v1.0 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 151 ကို MB
Pakage ထုံးစံလေယာဉ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူသုံးလေယာဉ် (ခရီးသည်တင်နှင့်ကုန်တင်) တို့ပါဝင်သည်နှင့်ခေတ်ပြားများနှင့်အထွာ, လွယ်ကူသော-to-ဖတ်နှိပ်လို့ရတဲ့ကို virtual cockpit, ကြော့လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းနှင့်လှလှပပပတ်အပြင်ပိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပါရှိပါတယ်။ စစ်မှန်သော radial မိမိစိတ်ကြိုက်အသံပါဝင်သည်။ ဘီလ် "Lio မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, Nigel Richards, ယောဟန် Smith ကဂျိမ်းဘဏ်များ
Curtiss Hawk ရဟတ်ယာဉ် III ကို 68 & BF2C-1 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
ဗားရှင်း FSX လှပသောထုံးစံအသံများနှင့်အလုပ်လုပ်ကို virtual cockpit (VC ကို) နဲ့ here5 မော်ဒယ်များနှင့်9ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ Curtiss Hawk ရဟတ်ယာဉ်သူတို့ထဲကအများစုဟာတိုက်လေယာဉ်များတို့က, Curtiss မော်တော်ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းနှင့် built အများအပြားလေယာဉ်တစ်စင်းမှဘုံနာမည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ အိုင်ဗင် Hsu
Curtiss ကို C-46 Mashup ကွန်မန် FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:6213
Size: 32.55 ကို MB
ဒီအံ့သြဖွယ် add-on သည်ပြီးပြည့်စုံသောအထုပ်ငါးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ကြီးသောအသံနှင့်တစ်ဦးကို virtual cockpit စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း Read လည်းပါဝင်သည်နှစ်ခုမော်ဒယ်များတစ်စစ်ရေးဗားရှင်းနှင့်တစ်ဦးကအရပ်သားဗားရှင်းပါဝင်သည်။ မှ L ခလုတ်ကိုချက်ချင်းမီးအင်ဂျင်ယူလိမ့်မည်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ထိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများ ba မဟုတ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ တယ်ရီဂျုံးစ်, Libardo Guzman, တွမ် Gibson, Greg ငရုတ်ကောင်း
ဘိုးအင်း xB-15 စမ်းသပ် Long-Range ဗုံးကြဲလေယာဉ် FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 8,27 ကို MB
အဆိုပါဘိုးအင်း xB-15 ဗုံးခွဲသူမူလက XBRL-1 အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတာဝေးပစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပျံများနှင့် redesignated XC-105 သို့ကူးပြောင်းမခံရမီ USAAC အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်တင် 1945 years.A ကြီးမြတ်အတွက် add-on တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးနောက် 8 အတွက်ပနားမားအတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်! မော်ကွန်းဗီဒီယို ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဂျော့ခ်ျ Diemer
Dinfia IA35-II ကို Huanquero FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 37.2 ကို MB
အသေးစိတ်အတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာအာဂျင်တီးနားမော်ဒယ်၏ထိပျတနျးနှင့်ရှားပါးမျိုးပွါးတစ်ဦးနှစ်ဦး 620 မြင်းကောင်ရေအိုဝါ 3190 အယ်လ် Indio 9-ဆလင်ဒါ Air-အအေး Supercharger radial အင်ဂျင်အားဖြင့် vintage.Powered, ပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံ 21 စက်တင်ဘာလ 1953 ပျံသန်းအဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားခံရဖို့အနည်းငယ်ကျောက်မျက် ပထမထုတ်လုပ်မှုကိုလေကြောင်းအနေဖြင့် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဗစ်တာ Astiz, ဂယ်ရီဂျုံးစ်, Damian အစွန်းရောက်
Bloch 220 Restauravia v1.1 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 15.7 ကို MB
ပြင်သစ်လေကြောင်းနှင့် Air ForceHistory: အဆိုပါ Bloch MB.2 အ 220s စဉ်အတွင်း Societe des ကိရိယာများအား Marcel Bloch ကတည်ဆောက်နေတဲ့ပြင်သစ်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပျံခဲ့သည်။ ပြည့်စုံကို virtual နှင့် 1930D cockpit.Two liveries ပါဝင်သည်အပါအဝင်အရည်အသွေးမြင့်၏ထိပျတနျးပြင်သစ်လေယာဉ်ပျံ အဆိုပါ MB220 တစ် All-Met ခဲ့ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Emannuel Geffroy (Restauravia.com)